Green: နှလုံးသား ခိုးယူမှု
Posted by aungminoo on , Labels: စာပေ |0comments
လူတစ်ယောက်ရဲ့ နှလုံးသားကို ထိုသူမသိအောင် တိတ်တဆိတ်ခိုးယူဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူသော
ကိစ္စတော့ မဟုတ်။ သို့ရာတွင် ဖြစ်အောင်လုပ်ရမည်။ ကိုယ့်ကို စိတ်ဆင်းရဲစေခဲ့သူ၊ ရင်ထဲမှာ
တစစ်စစ် နာကျင်အောင်လုပ်ခဲ့သူ၊ဖျပ်ဖျပ်လူးမျှ ခံစားရအောင် ရက်စက်ခဲ့သူ။ ထိုမိန်းမတစ်ယောက်ကို
သက်သာခွင့်ပေးမပေးနိုင်၊ ထိုက်တန်သော တုံ့ပြန်မှုကိုသာ ပေးရမည်။ ညီမျှသော စိတ်ဒုက္ခကို
ပြန်လည်ခံစားစေရမည်။ရင်နာမှုပြစ်ဒဏ်ကို ပြန်လည်ပေးဆပ်စေရမည်။ အနည်းဆုံး စိတ်ကူးထဲမှာပဲ
ထို့ကြောင့် . . .
ညဘက်အိပ်မောကျချိန်လောက်ကိုမှန်းပြီး သူ့အိမ်ထဲဝင်လာခဲ့သည်။ အပေါ်ထပ်ကို
တက်သည်။ အိပ်ခန်းထဲဝင်သည်။ ခပ်မှိန်မှိန်ထွန်းထားသော ပြာလဲ့လဲ့မီးရောင်ကြောင့် အခန်းထဲမှာ
သူသည် အိပ်ရာပေါ်တွင် ပက်လက်အနေအထားဖြင့် အိပ်မောကျနေသည်။ ထို အချက်သည်
ကံကောင်းသွားခြင်းဖြစ်၏။ တကယ်လို့ သူသာ ဘေးစောင်းအိပ်နေလျှင် အနေအထား ပြင်ပေးရဦး
မည်။ အခုတော့ အဆင်သင့် အနေအထားပဲ။ သူသည် အပူပင်ကင်းစွာ စိတ်ချလက်ချအိပ်နေတာ
သူ့နှုတ်ခမ်းကလေး အနည်းငယ်ဟနေတာကို မီးရောင်မှိန်မှိန်မှာမြင်ရသည်။ ထိုမြင်ကွင်းကို
မြင်ရသောအခါ ဟိုယခင်အခါဆီက ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ပိတ်ကားမှရောင်ပြန်ဟပ်သော အလင်းရောင်ကြောင့်
မှုန်မှုန်ရေးရေးမြင်ရသော မျက်နှာကို သတိရစေသည်။ ထိုစဉ်ကလည်း သူ့နှုတ်ခမ်းသည် ခုလို
ခပ်ဟဟကလေးပါပဲ။ သို့ရာတွင် ခုချိန်မှာတော့ နှုတ်ခမ်းသည် အရေးပါသော အနေထားမှာမရှိ။
သူ့ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းမှာ လွှမ်းခြုံထားသောစောင်ကို အသာဆွဲလှပ်လိုက်သည်။ ည၀တ်င်္အကျီ၏
အောက်မှာ သူ့ရင်သည် နိမ့်ချည်မြင့်ချည်ဖြစ်နေ၏။ စည်းချက်မှန်မှန် အသက်ရှုနေသည့်သဘော။
ရှေ့ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စက အရေးကြီးသည်။ နည်းနည်းလေးမှ တုံ့နှေးလို့မရ။
တိမ်းစောင်းသွားလို့မဖြစ်။ ဆရာဝန်တစ်ယောက်လို တည်ငြိမ်ပြီး ခါးပိုက်နှိုက်တစ်ယောက်လို လျင်မြန်
လက်ချောင်းများကို ခပ်တင်းတင်းပူးကပ်၍ လက်ဖ၀ါးနှင့်တစ်တန်းတည်းနေအောင်ထားပြီး
သူ့ရင်ခေါင်းအတွင်းသို့ ဆတ်ခနဲ ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ ပူနွေးသောအရာတစ်ခုကို စမ်းမိသောအခါ
ဆုပ်ကိုင်ပြီးလက်ကို အလျင်အမြန်ပြန်ဆွဲထုတ်လကို၏။
ရေထဲကအရာဝတ္တုတစ်ခုကို နှိုက်ယူလိုက်သောအခါ ရေပြင်ပေါ်တွင် ကွဲရာအက်ရာ ကျန်ရစ်
ခဲ့ခြင်းမရှိသလို သူ့ရင်အုံ၏ လက၀်ဲဘက်ယွန်းယွန်းမှ အရေပြားသည်လည်း ဘာဒဏ်ရာမှမဖြစ်ဘဲ
ပကတိအတိုင်းရှိနေ၏။ ကိုယ့်လက်ထဲမှာတော့ သူ့နှလုံးသားသည် တဆတ်ဆတ်ခုန်ရင်း ပါလာသည်။
သူ့နှလုံးသားကို ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ထဲထည့်ဆွဲပြီး အိမ်အပြင် ပြန်ထွက်လာခဲ့၏။ သူကတော့
နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ဆက်လက်အိပ်ပျော်နေဆ။ဲ နှလုံးသား အခိုးခံလိုက်ရကြောင်းကို သူတော်တော်နဲ့
သိမှာမဟုတ်။ မနက်အိပ်ရာကနိုးသောအခါ ရင်ထဲကဟာနေသလိုလို၊ တစ်ခုခုလိုနေသလိုလိုတော့
ခံစားရလိမ့်မည်။ နောက်ပိုင်း စိတ်လှုပ်ရှားစရာနဲ့ကြုံပါလျက် ရင်မခုန်ပဲရှိနေတော့မှ အံ့သြပြီးသူ့နှလုံးသားကိုတော့ ကောင်းကောင်းပညာပေးရမည။် ကြွတ်ကြွတ်အိတ်ထဲက သူ့နှလုံးသားကို ထုတ်ကြည့်သည်။ ဒုတ်ကနဲ ဒုတ်ကနဲခုန်နေတုန်းပင်ရှိ၏။
စိတ်ထဲမှာ ရုတ်တရက်မြူးကြွလာသည်။ ကစားစရာအသစ်တစ်ခုရလာသော ကလေးငယ်
တစ်ယောက်သည် အိမ်ပြန်ရောက်သည်အထိ မစောင့်နိုင်သလိုပင် ဖြစ်၏။ သူ့နှလုံးသားကို မြေပေါ်
ပစ်ချလိုက်သည်။ မြေပြင်နှင့်ထိသောအခါ တင်းနစ်ဘောလုံးတစ်လုံးလိုပင် ခုန်ပြီး ပြန်တက်လာသည်။
သူ့နှလုံးသားကို ဘတ်စ်ကက်ဘောလို ပုတ်ကစားနိုင်၏။
“အဲဒီမှာ . . . ကျွန်တော်တို့ကို ခဏငှားပါလား . . . ကျွန်တော်တို့ ကန်နေတဲ့ ဘောလုံး
ပေါက်သွားလို့ . . .”
ကောင်လေးတစ်ယောက်က လာပြောသည်။ သူတို့သည် မာကျူရီမီးရောင်အောက်က
“ကဲ . . . ရော့ . . . စိတ်ရှိလက်ရှိသာ ကန်ကြစမ်းကွာ . . . ”
ဆိုပြီး သူ့နှလုံးသားကို ပစ်ပေးလိုက်၏ ။ ကောင်လေးသည် နှလုံးသားကို တစ်ချက်နှစ်ချက်
ပုတ်ကြည့်ပြီး သဘောကျဟန်ဖြင့် . . .
“တော်တော်ကန်လို့ ကောင်းမှာပဲ . . . ” ဟု ပြောသည်။
ဟုတ်လည်း ဟုတ်သည်။ သူ့နှလုံးသားမှာ တွန်းကန်အားအလွန်ကောင်းသည်။ ဖြည်းဖြည်း
လေးကန်လိုက်ရုံနဲ့ အဝေးကြီးပြေးနိုင်သည်။ သူ့နှလုံးသားသည် ကလေးတွေကြားမှာ ဟိုမှဒီမှ
“ဟင်း . . . ဒီလောက်မာနကြီးတဲ့ နှလုံးသား . . . ခုတော့ သူ များခြေထောက်ကြား
လှိမ့်အကန်ခံနေရပြီမဟုတ်လား . . . ” ဟု တွေးရင်း ကျေနပ်စွာကြည့်နေမိ၏။
ချာတိတ်နှစ်ယောက်သည် ၀မ်းတူးရိုက်ရင်းသယ်လာသည်။ ပြီးတော့ တစ်ဖက်မှလွတ်နေသော
ရှေ့တန်းလူဆီ ထိုးပေးလိုက်သည်။ ရှေ့တန်းမှ ကောင်လေးက ကျုံးကန်ထည့်လိုက်၏။
နှလုံးသားသည် ဂိုးတိုင်ဆီ တန်းကနဲ ပြေးသွားသည်။ ဂိုးသမားက ဖမ်းဖို့ကြိုးစားသည်။
သို့ရာတွင် အရှိန်က မြန်လည်း မြန် ၊ ပြင်းလည်းပြင်းလွန်းလှသဖြင့် မဖမ်းနိုင်ဘဲ နှလုံးသားက
သူ့ရင်ဘတ်ကို ဒိုင်းကန၀ဲ င်ဆောင့်လိုက်သည်။
ဂိုးသမားလေးသည် နောက်ကို ဆယ်ပေလောက် လွင့်စဉ်ထွက်သွားပြီး မြေပေါ်မှာ
“ဟာ . . . ” ဆိုပြီး သူ့ဆီ ချာတိတ်တွေ ၀ိုင်းအုံပြေးသွားသည်။ တစ်ယောက်ကပွေ့ထူပြီး
ခေါ်ကြည့်သည်။ ကောင်လေးမှာ ပြန်မထူးနိုင်၊ သတိလစ်မေ့မြောနေပြီ။
ဆေးရုံအမြန်ပို့နိုင်သောကြောင့် သက်သာရာရသွားခြင်းဖြစ်သည်ဟု နောက်ပိုင်းကျမှ
သူ့နှလုံးသားကတော့ အရှိန်မသေသေးဘဲ မြေကြီးပေါ်မှာ ခုန်ဆွခုန်ဆွလုပ်နေသည်။
ထို့ကြောင့် ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ထဲ အမြန်ကောက်ထည့်ပြီး ထွက်လာခဲ့ရ၏။ တော်တော် ကောင်းကျိုး
မပေးတဲ့ နှလုံးသား၊ အိမ်ရောက်မှ ရေရေလည်လည်ဆုံးမပြီး ပညာပေးရမယ်ဟု တေးထားလိုက်ပြီး
တိုက်တန်းတွေကြားက ဖြတ်လျှောက်လာသည်။ တစ်နေရာတွင် ခွေးလေခွေးလွင့်
တစ်ကောင်သည် အမှိုက်ပုံကြားမှာ နှုတ်သီးဖြင့်ထိုးဆွရင်း စားစရာတစ်ခုခု တွေ့လိုတွေ့ညား
စိတ်ကူးတစ်ခုပေါ်လာသည်။ ဒါနှင့် လက်ဖျောက်တီးပြီး ခွေးကို ခေါ်လိုက်သည်။ ခွေးက
ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ကိုမြင်တော့ သဘောပေါက်သွားဟန် တူ၏။ အမြှီးနှံ့ပြီး အနားကိုပြေးလာသည်။
ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ထဲကနှလုံးသားကို ထုတ်ပြီး ခွေးရှေ့မှာ ချပေးလိုက်သည်။
ခွေးက အနံ့ခံကြည့်သည်။ စားလို့ရမှန်းသိသွားသောအခါ အငမ်းမရ ထိုးဟပ်လိုက်၏။
ဆတ်ခနဲ တုန်သွားပြီးနောက် ပြန်လွှတ်ချလိုက်သည်။ အီ ခနဲ တစ်ချက်ဖြစ်သွားသည်။ ထို့နောက်
သူ့နှလုံးသားကို ကောက်ယူကြည့်လိုက်တော့ ပွန်းရာခြစ်ရာလေးတောင် မရှိ။ မြေပြင်ပေါ်
မှာတော့ ခွေး၏ အစွယ်တစ်ချောင်း ကျိုးပြီး ကျကျန်ရစ်ခဲ့တာ တွေ့ ရသည်။
အတော် မာရေကျောရေ နိုင်တဲ့ နှလုံးသားပဲဟု မှတ်ချက်ချရင်း ဆက်လျှောက်လာခဲ့သည်။
တိုက်တန်းလျားတွေလွန်သောအခါ လမ်းက နည်းနည်းမှောင်ရိပ်ကျနေသည်။
ခဏကြာသောအခါ ရှေ့ဘက်မှာ စက်ဘီးနှစ်စီးလာနေတာ တွေ့ရသည်။ ကင်းလှည့်လာသော
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးပင် ဖြစ်လေ၏ ။ အနားရောက်လာတော့ စက်ဘီးကိုရပ်ပြီး ဆင်းလာသည်။
“ဘယ်ကလာတာလဲ . . . ”
“အလုပ်ကလာတာပါ . . . ” ဟူ ပြီးစလွယ် ဖြေလိုက်သည်။
လက်မှာဆွဲထားသော ကြွ့ပ်ကြွပ်အိတ်ကို မသင်္ကာသလိုကြည့်ပြီး . . .
“အဲဒီ အိတ်ထဲက ဘာလဲ . . . ”
“နှလုံးသားပါ . . . ” ဟု ဖြေသောအခါ အဖော်ဖြစ်သူက . . .
“ပေါက်ကရတွေ ပြောနေတယ် . . . အရက်မူးလာတယ်ထင်တယ် . . . ” ဟု ခပ်တိုးတိုး
ပြောသည်။ ကျန်တစ်ယောက်က . . .
“ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စစ်ဆေးကြည့်ရမှာပဲ . . . အိတ်ကို ဖွင့်ပြစမ်း . . . ”ဆိုသဖြင့် ဖွင့်ပြလိုက်သည်။
သူကလက်နှိပ်ဓါတ်မီးနှင့် ထိုးကြည့်ပြီး အံသြဟန်ဖြင့် . . .
“ဟာ . . . ရွှေတုံးကြီးပဲ . . . ”
“ဗျာ . . . မဟုတ်ပါဘူး . . . နှလုံးသားပါ . . . ”
“ဒီမှာ လက်ပူးလက်ကြပ်တွေ့နေတာတောင် ငြင်းနေရသေးလား . . . ”
ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ထဲကို ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ ဟာ . . . တကယ်ပါပဲ။ နှလုံးသားလို ပုံစံမျိုး
ဖြစ်နေသော ရွှေတုံးကြီးတစ်တုံးသည် လက်နှိပ်ဓါတ်မီးရောင်အောက်မှာ ၀င်းလက်တောက်ပြောင်နေတာ တွေ့ရသည်။ အမယ် . . . နိုင်တီနိုင်း ပွိုင့် နိုင်းနိုင်း (99.99) ဆိုသော ဂဏန်းလေးတောင်
“ဟာ . . . ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ . . . ကျွန်တော်ယူလာတုန်းက နှလုံးသားစစ်စစ်ပါ . . . ”
“အူကြောင်ကြောင် လုပ်မနေနဲ့ . . . စခန်းလိုက်ခဲ့ . . . ”
ဆိုပြီးခေါ်သွားသဖြင့် ပါသွားရ၏ ။ စခန်းထဲရောက်တော့ တာဝန်မှူးစားပွဲရှေ့သို့
“ဘာဖြစ်တာလဲဟေ့ . . . ”
“ရွှေတုံးကြီးတစ်တုံး သယ်လာတာတွေ့လို့ မသင်္ကာတာနဲ့ ဆွဲလာတာ ဆရာ . . . ”
“ပြစမ်းပါဦး . . . ”
ရဲတပ်ဖွဝဲ့ င်တစ်ယောက်က ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ကို စားပွဲပေါ်တင်ပေးလိုက်သည်။ တာဝန်မှူးက
ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ကိုဖွင့်ပြီး ငုံ့ကြည့်သည်။ မျက်မှောင်ကုတ်လိုက်ပြီး အိတ်ထဲကို လက်နှိုက်သည်။
လက်ပြန်ထုတ်သောအခါ စတီးချိုင့်လေးတစ်လုံး ပါလာသည်။
“ဘယ်မှာလဲကွ ရွှေတုံး . . . ”
ရဲတပ်ဖွဝဲ့ င်နှစ်ယောက်သည် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး နားမလည်သလို
ပုံမျိုးဖြစ်နေသည်။။ တာဝန်မှူးက စတီးချိုင့်ကို ဖွင့်ကြည့်သည်။ အထဲမှာ ငါးရိုးအစအနများနှင့်
တာဝန်မှူးသည် သူ့လူနှစ်ယောက်ကို မော့ကြည့်ပြီး . . .
“မင်းတို့နှစ်ယောက် မူးနေလား . . . ”
“ဟာ . . . ဆရာရယ် . . . တာဝန်ချိန်ကြီးမှာသောက်ရဲပါ့မလား . . . ”
“စိတ်မရှိပါနဲ့ ညီလေးရာ . . . ကိုယ့်ကောင်တွေ ၀ီရိယ ပိုသွားလို့ပါ . . . ကဲ . . . ကဲ . . .
သွားနိုင်ပါပြီ . . . ” ဆိုပြီး စီးကရက်တောင် တိုက်လိုက်သေးသည်။
စခန်းထဲက ထွက်လာစဉ် . . . “ကျွန်တော်တို့ သေသေချာချာမြင်တာပါဆရာ . . . ” ဟု
ရဲစခန်းအပြင်ရောက်၍ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ကို အသာဖွင့်ကြည့်တော့ သူ့နှလုံးသားသည်
ပင်ကိုယ်အတိုင်းပြန်ဖြစ်ပြီး တဒုတ်ဒုတ်ခုန်နေတာ တွေ့ရ၏။ “အတော် ပြဿနာရှာတဲ့ နှလုံးသား . . .
တွေ့မယ် . . . ” ဟု စိတ်ထဲက ကြိမ်းရင်း ဆက်လျှောက်လာခဲ့၏။
ထိုစဉ် ဟိုးခပ်လှမ်းလှမ်းမှ မောင်းလာနေသော ကားတစ်စီး၏မီးရောင်ကို တွေ့ရသည်။
စိတ်ကူးတစ်ခုဖျတ်ကနဲ ပေါ်ပေါက်လာ၏။ နှလုံးသားကို အိတ်ထဲထုတ်ပြီး လမ်းပေါ်ချထားလိုက်သည်။
ကားသည် အရှိန်နှင့်မောင်းရင်း ဖြတ်သွားသည်။ နှလုံးသားကို မနင်းမိဘဲ ခွကျော်သွား၏။
“ဟင်း . . . ကံကောင်းလို့ပေါ့ကွာ . . .” ဟုတွေးပြီး နှလုံးသားကို ပြန်ကောက်ယူမည်ပြုစဉ်
နောက်ထပ်ကားတစ်စင်းလာနေတာတွေ့ရသဖြင့် လမ်းပေါ်ပြန်ချထားပြီး စောင့်ကြည့်နေလိုက်သည်။
ဒီတစ်ခါလာတဲ့ကားက ပိုကြီးသည်။ ကွန်တိန်နာကားကြီးဖြစ်၏ ။ ကုန်တန်ချိန် အတော်များဟန်
တူသည်။ စက်သံအတော်ပြင်းသည်။ ကားရှင်းသောကြောင့် အရှိန်ကိုလည်း တင်မောင်းလာသည်။
ခဏအတွင်းမှာပင် နီးကပ်လာပြီ။ ရှေ့ဘီးက လမ်းပေါ်မှာချထားသော နှလုံးသားကို မနင်းမိဘဲ
လွဲသွားသည်။ နောက်ဘီးတွေကတော့ နှစ်လုံးတွဲတွေ ဖြစ်သောကြောင့် မလွဲချော်နိုင်။
ဒုန်းခနဲ မြည်ပြီး ကားကြီးသည် မြောက်တက်သွားသည်။ ပြန်ဆောင့်အကျတွင်
နောက်မြီးပိုင်းက ယမ်းခါပြီး ပလက်ဖောင်းပေါ် တစ်ခြမ်းတင်သွား၏။ ဒရိုင်ဘာသည် ခက်ခက်ခဲခဲ
ထိန်းလိုက်ရပြီး ကားကို ရပ်လိုက်သည်။ ပြတင်းပေါက်မှ ခေါင်းပြူထွက်လာပြီး နောက်ကို
လှည့်ကြည့်လိုက်သည်။ သူ့မျက်နှာထားမှာ ဒီလောက်ညီညာ ပြန့်ပြူးနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာ
ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာပါလိမ့်ဆိုပြီး ဇဝေဇ၀ါဖြစ်နေပုံပေါ်သည်။ ပြီးမှ ကားကို ပလက်ဖောင်းပေါ်မှ
နှလုံးသားကို သွားကြည့်လိုက်တော့ ကတ္တရာလမ်းထဲမှာ မြုပ်နေတာ တွေ့ရသည်၊၊
ဆွဲထုတ်ယူလိုက်သောအခါ ကတ္တရာလမ်းမှာ ချင့်ဝင်နေသော တွင်းငယ်တစ်ခု ဖြစ်ကျန်ခဲ့၏၊၊
သူ့နှလုံးသားကတော့ ပုံစံလုံးဝမပျက်။ တဒုတ်ဒုတ် ခုန်နေတုန်း။
သာမာန် အသွေးအသားဖြင့် တည်ဆောက်ထားပြီး လက်ညိုးနှင့် ခပ်ဆတ်ဆတ်ထိုးဖောက်
လိုက်လျှင် ဖောင်းခနဲ ပေါက်ထွက်သွားလိမ့်မည် ထင်ရသော သူ့နှလုံးသားသည် ဒီလောက်ထိ
ခံနိုင်ရည် ရှိနေတာ အံ့သြစရာပင် ဖြစ်၏ ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခံနိုင်ရည်အားဆိုသည်မှာ အကန့် အသတ်
ထို့ကြောင့် အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါ သူ့နှလုံးသားကို အသားကြိတ်စက်ထဲသို့ ဖိသိပ်ထည့်ပြီး
ခလုတ်ဖွင့်လိုက်သည်။ ကြိတ်စက်သည် ရုတ်တရက် မလည်နိုင်ဘဲ တင်းခံနေသည်။ ပြီးတော့မှ
တအားရုန်ကန်ပြီး ကြိတ်ဆွဲလိုက်သည်။ ပွတ်တိုက်ကြိတ၀်ါးနေသည့်အသံတွေ ထွက်လာသည်။
ထိုအသံများမှာ မော်တာလည်သံနှင့်ရောနှောပြီး ဆူညံနေတာ အူယားစရာကောင်းလှသည်။
ခဏအကြာတွင် တစ်ဖက်ထွက်ပေါက်ထဲမှ အပိုင်းအစကလေးတွေ ထွက်လာသည်။
ဘာတတ်နိုင်သေးလဲဟု ရေရွတ်မည်ပြုစဉ်မှာပင် တစ်စုံတခု မှားယွင်းနေကြောင်း သတိပြုမိ၏ ။
အပိုင်းအစလေးများသည် အသွေးအသားတုံးကလေးများမဟုတ်ပဲ သံတွေ သံခဲ ကလေးတွေ
ဖြစ်နေခြင်းပါပဲ။ လည်နေသော မော်တာ ရပ်သွား၏။ သူ့နှလုံးသားသည် စက်ထဲမှ အလုံးအထည်
မပျက်ပဲ ခုန်ထွက်လာသည်။ စက်ထဲကို ငုံ့ကြည့်လိုက်သောအခါ သံမဏိရိုလာဓါးသွားများမှာ
လုံးဝကြွေမွ ပျက်စီးနေတာ တွေ့လိုက်ရ၏။
ဒီလောက်တောင် ဖြစ်လှတာ သိကြရောပေါ့။
သူ့နှလုံးသား ကို ပလက်တီနမ်ဆန်ခါပေါ် တင်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ထောင့်ငါးရာဒီဂရီ
စင်တီဂရိတ်ရှိသော အောက်ဆီအက်တလင်းမီးလျှံဖြင့် အပူပြင်းတိုက်လိုက်သည်။ ခံနိုင်လျှင်
သူ့နှလုံးသားသည် နစ်ခရုန်းသတ္တုစပ်လို ရဲရဲတောက်လာ၏ ။ ဒီအတိုင်းဆိုလျှင် မိနစ်ပိုင်း
အတွင်းမှာပင် ပြာကျသွားလိမ့်မည်။ ကိုင်း . . . မှတ်ပြီလား။ ထိုစဉ်မှာပင် သူ့နှလုံးသားထံမှအခိုးအငွေ့များထွက်လာသည်။ အနံ့က စိမ်းရွှေရွှေ။ ထိုအနံ့များကို ရှုရှိုက်မိသောအခါ ရင်ထဲကတလိပ်လိပ် ဖြစ်လာသည်။ စိတ်အာရုံ တက်ကြွလာသည်။ တဖြည်းဖြည်း အူမြူးလာသည်။ နောက်ဆုံးဘယ်လိုမှ ထိန်းချူပ်လို့ မရတော့ပဲ အူလှိုက်သည်းလှိုက် တခစ်ခစ် တဟားဟား
လက်စသတ်တော့သူ့နှလုံးသားမှ ထွက်ပေါ်လာသော အခိုးအငွေ့များမှာ ရှုရှိုက်မိလျှင် လူကို
ရယ်မောစေတတ်သော လပ်ဖင်းဂက်စ် ခေါ် နိုက်ထရပ်စ်အောက်ဆိုဒ် ဓါတ်ငွေ့တွေ ဖြစ်နေတာကိုး။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ထိုအာဂနှလုံးသားကို ပိုင်ရှင်ထံသို့သာ ပြန်ပို့ပေးလိုက်ရတော့သည်။
နောက်တစ်နေ့ကျတော့ ထိုမိန်းမသည် နှလုံးအထူးကုဆရာဝန်ဆီ သွားပြသည်ဟု
သတင်းကြားရသည်။ သူ့ရောဂါက အခြား နှလုံးရောဂါသည်တွေ လို ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊
အသက်ရှုမ၀ခြင်း၊ မောပန်းခြင်း စသည်တို့လို မဟုတ်။ နှလုံးသားထဲက မခံမရပ်နိုင်လောက်အောင်
ယားကျိကျိ ဖြစ်နေလို့ ဆိုပဲ။
( နှလုံးသား မာကျောသူများ နှင့် ဆုံဆည်းခြင်းမှ ကင်းဝေကြပါစေ)